३ वटा नयाँ पद थप्ने नेपाल प्रहरीको प्रस्ताव - News 88 Post
३ वटा नयाँ पद थप्ने नेपाल प्रहरीको प्रस्ताव
June 7, 2021 June 8, 2021 N88LeaveaComment on ३ वटा नयाँ पद थप्ने नेपाल प्रहरीको प्रस्ताव
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले तीनवटा नयाँ पद थप्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
बढुवामा देखिएको समस्या समाधान गरी तल्लो तहका कर्मचारीको मनोबल उकास्न नेपाल प्रहरीले तीनवटा नयाँ पद थप्ने प्रस्ताव गरेको हो । वरिष्ठ नायब निरीक्षक, वरिष्ठ हवल्दार र सहायक हवल्दार पद थप्नका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ ।
नायब निरीक्षक .(सइ) बाट इन्स्पेक्टर तथा जवानबाट हवल्दार बढुवामा १५ वर्षभन्दा धेरै समय लाग्ने भएपछि तल्लो तहका प्रहरीमा धेरै असन्तुष्टि छ । पद थपेपछि बढुवा समयमै हुने र तल्ला कर्मचारीको मनोबल पनि बढाउने प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ । सशस्त्र प्रहरीमा यसअघि नै यी पद कायम छन् । सेनामा पनि तल्लो तहमा धेरै पद छन् ।
प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर नयाँ पद थप गर्न लागिएको हो । त्यसका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले नियमावली संशोधनको मस्यौदा मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको छ । गृहले कानुन तथा अर्थ मन्त्रालयसँग राय लिएर नियमावली संशोधन गर्नेछ । केही पद थप्नेबारे छलफल भइरहेको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्त कुँवरले बताउनुभयो ।
नयाँ पद थपिएमा सइबाट ६–७ वर्षमा वरिष्ठ सइ र वरिष्ठ सइबाट ६–७ वर्षमा इन्स्पेक्टरमा बढुवा हुनेछन् । ०६० मा सइमा बढुवा भएकाहरू अहिलेसम्म पनि सोही पदमा कार्यरत छन् । समयमा बढुवा नभएको भन्दै कतिपयले राजीनामा दिएका छन् ।
त्यस्तै, जवानबाट हवल्दारमा बढुवामा हुन पनि १५ वर्षभन्दा धेरै समय लाग्ने अवस्था छ । जवानमा भर्ना भएका कतिपयले असइमा समेत नपुगी ३० वर्षे अवधि पुगेर अवकाश पाउने गरेका छन् । यो समस्या सम्बोधन गर्न जवानपछि सहायक हवल्दार, हवल्दार र वरिष्ठ हवल्दारको पद सिर्जना गर्न लागिएको प्रवक्ता कुँवरले बताउनुभयो ।
सकेसम्म दरबन्दी थपेर, नभए हालकै दरबन्दीबाट मिलान गरेर नयाँ पद थप्नेबारे छलफल भइरहेको बताइएको छ । यसका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रारम्भिक कामसमेत भइसकेको छ ।
ओलीकाे पछि लाग्दा बर्बाद भए बादल, ओलीले दुनाे साेझिएसी नराम्राेसित पछारे !
जसपामा तेस्रो गुट सक्रिय, महन्थ र उपेन्द्र दुवैमाथि चुनौती, कस्ले चलाउँदैछ नयाँ झुण्ड
रबी लामिछानेको टीम स्थलगत रिपोर्टिङ सहित राहत तथा उद्धारको लागि सिन्धुपाल्चोकमा (भिडियो)
June 18, 2021 June 18, 2021 N88
यी हुन् यी हुन् माधव नेपालकाे गुटबाट मन्त्री हुन सिंगाैरी खेलेर दाम्लो नै चुडाँउन खोज्नेहरू !